१८ देखि २० प्रतिशत बढ्यो कर्मचारीको तलब,कर्मचारीमा खुसियाली अब कसको कति ? सूचीसहित - Kamana Khabar१८ देखि २० प्रतिशत बढ्यो कर्मचारीको तलब,कर्मचारीमा खुसियाली अब कसको कति ? सूचीसहित - Kamana Khabar
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १८:०० प्रकाशित
काठमाडौ १५ जेष्ठ
सरकारले कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १८ देखि २० प्रतिशत तलब वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् ।
राजपत्र अनंकिततर्फ २० प्रतिशत र राजपत्रांकिततर्फ १८ प्रतिशत हुने गरी वृद्धि गरिएको तलब आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।तलबमा बृद्धि भएपछि कर्मचारीमा खुसियालि छाएकोछ ।
कति थियो तलब, अब कति ?
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १८:०० मा प्रकाशित